Mabhuku anotengesa zvakanyanya munhoroondo uye panguva ya2020, | Zvazvino Zvinyorwa
Pamusoro peBhaibheri - nemakopi anodarika mabhiriyoni mashanu - mabhuku anotengeswa zvakanyanya munhoroondo akanyorwa zana ramakore rechiXNUMX risati rasvika. Ndezve Don Quixote (1605), naMiguel de Cervantes uye Nhoroondo yemaguta maviri (1859), naCharles Dickens. Parizvino, aya mazita maviri akanyoreswa anopfuura mazana mashanu emamiriyoni uye mazana maviri emakopi akatengeswa, zvichiteerana.
Muzana ramakore rechimakumi maviri rondedzero yemabhuku ane budiriro hurusa hwokudhinda yakatungamirwa Ishe wemhete, Muchinda mudiki y Iyo Hobbit. Saka, Munyori weBritish JRR Tolkien akabata zvinyorwa zvekutanga nezvechitatu zvakatengwa zvakanyanya zana ramakore. Nekusvika kwemireniyumu nyowani, rukudzo rwakadonha kuna JK Rowling. Uye hongu, iye musiki wenyika yaHarry Potter akahwina chigaro icho chaizodhura kumubvisa pachigaro.
1 Ishe weRings (1954), naJRR Tolkien
1.1 Context uye kugadziriswa
2 Muchinda Muchinda (1943), naAntoine de Saint-Exupéry
3 Iyo Harry Potter chiitiko
3.1 Iyo Harry Potter nyaya muchidimbu
3.2 Chinyorwa chemazita ezvinoumba iyo Harry Potter saga
3.2.1 Mamwe mazita akafanana
4 Dan Brown nemwanakomana wake akarasika: Robert Langdon
5 Akanyanya Kutengesa Mabhuku 2020
5.1 Aquitania (2020), naEva García Sáenz de Urturi
5.2 Ropafadzo dzeMutumwa (2009), naDolores Redondo
5.3 Infinity mune junk (2019), naIrene Vallejo
5.4 Mutsara wemoto (2020), naArturo Pérez-Reverte
5.5 Rey Blanco (2020), naJuan Gómez-Jurado
5.6 Chikoro chakapusa munyika (2020), naPablo Aranda
Ishe wemhete (1954), naJRR Tolkien
Context uye kugadziriswa
Yakaburitswa muzvikamu zvitatu pakati pema50: Iko Kubatana kweRin'i, Iyo Towers mbiri y Kudzoka kwaMambo. Tolkien pakutanga akazvitora sekuenderera kwe Iyo Hobbit. Kunyangwe zano rayo rakatotungamirwa ne Ivo Silmarillion. Iko Tolkien anorondedzera zviitiko zveKutanga neChipiri Zera reZuva. Ndiko kuti, zera remashure uye kusimuka kwevarume.
Saizvozvo, nhepfenyuro yakawanda, yemitambo uye terevhizheni inoenderana Ishe wemhete ivo vakakuita kutaura kwakakurumbira zvikuru kwezana ramakore rechi XNUMX. Uye zvechokwadi, Iyo trilogy yemafirimu akagadzirwa naPeter Jackson akapedzisa kuita iri zita remukurumbira pasi rose. Hazvishamisi kuti yakamisikidzwa pakati pegumi rakakwirira kwazvo firimu sagas yenguva dzese.
Pakati-pasi inzvimbo huru yekunyepedzera inogarwa nevarume, hobbits, elves, madiki, nezvimwe zvisikwa zvinonakidza. Ikoko, Frodo Bolson, hobbit kubva kuThe Shire inogara nhaka yeIye Ring. Paanogamuchira iyo chishongo chakagadzirwa neRima Ishe, anotanga epic uye ine njodzi rwendo kumaodzanyemba kuti ariparadze.
Basa risingadziviririke, kukosha kwaro kunopfupikiswa mumutsara unotevera: “… Rin'i yekutonga vese. Mhete yekuvawana, Ringi yekuvakwezva vese uye nekuvasunga murima muNyika yeMordor panopararira maShadows ”.
Tolkien Nyaya (Iyo ...
Muchinda mudiki (1943), naAntoine de Saint-Exupéry
Muchinda mudiki Ndiro bhuku rinoverengerwa zvakanyanya uye rakashandurwa mumutauro wechiFrench munhoroondo. Zvinoenderana nenhau senge Le Monde, Anopfuura mamirioni zana nemakumi mana emakopi ebhuku iri akatengeswa. Saizvozvowo, iri basa rave kutaurwa nemitambo isingaverengeke mumafirimu, theatre uye terevhizheni.
Gore rakatevera kuburitswa kwa Muchinda mudiki, Exupéry akatsakatika pakati penzvimbo yekubvuma panguva yeHondo Yenyika II. Aya mamiriro ezvinhu akapa mweya wengano kune murume ane mukurumbira mukurumbira mukati meFrance mauto emhepo.
Le Petit Muchinda --Zita rekutanga muchiFrench- inyaya ine runyorwa inoperekedzwa nemadhirowa (macolorcolor) akagadzirwa nemunyori iye. Uyeiye protagonist mutyairi akapunzika mugwenga reSahara; ipapo anosangana nemuchinda mudiki anobva kune imwe nyika. Kunyangwe rondedzero yake iine maficha enyaya yevana, ine fungidziro yekufungisisa nezvehunhu hwevanhu uye zvinoreva hupenyu.
Mune akati wandei ezvikamu zveiyo nyaya, kushoropodzwa kwakanangana nemaonero anotarisana nevakuru kurarama kwavo kunonzwisisika. Mune imwe ndima yakadaro, mambo anokurudzira muchinda mudiki kuti azvitonge. Saizvozvo, kudyidzana pakati pemuchinda mudiki uye gava kunoshanda kuratidza kukosha kwehukama uye kuomarara kwehukama hwevanhu.
Muchinda Muchinda (Mwana)
Iyo Harry Potter chiitiko
"Munyori wesaga rakakurumbira remakumi matatu emakore apfuura aive mutsime: asina basa, asina mari uye mukuchema kufa kwaamai vake paakaumba mudzidzisi wemashiripiti" (Iyo clearin, 2020). Joanne Rowling akapedza yake yekutanga Harry Potter chinyorwa muna 1995. Iko kunyora kwakarambwa nevaparidzi vakawanda kusvikira Bloomsbury yaburitsa yekutanga makopi 1997 muna XNUMX.
Iyo yekumirira kwenguva yakareba yakamirirwa yekumisikidza yakaitika mushure mekuonekwa kwechitsauko chechitatu chesaga muna 1999. Kuwanikwa kwekodzero dzekutengesa muUnited States nemuparidzi Scholastic kwaivewo kwakakosha.. Yasara nhoroondo: Makore makumi maviri gare gare, saga raHarry Potter rinounganidza anopfuura mazana mashanu emamiriyoni emabhuku akatengeswa uye kukosha kwechiratidzo chayo kunodarika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora.
Iyo Harry Potter nyaya muchidimbu
Iwo mabhuku manomwe anoumba iwo akateedzana anotaura nezvekurwira pakati paHarry Potter, wechidiki nherera wizard, uye mhondi yevabereki vake, Lord Voldemort. Zvizhinji zvezviitiko zvinoitika kwakatenderedza maHowarts, chikoro cheBritish chewizardry uye wizardry chinotungamirwa naPurofesa Albus Dumbledore ane simba. Ikoko, protagonist inosangana neshamwari dzake dzakanakisisa uye vakavimbika squires, Hermione Granger naRon Wesley.
Chinyorwa chemazita ezvinoumba iyo Harry Potter saga
harry muumbi uye dombo reMuzivi (1997).
Harry Potter uye Chamber of Chakavanzika (1998).
Harry Potter uye Musungwa weAzkaban (1999).
Harry Potter uye iyo Goblet yeMoto (2000).
Harry Potter uye iyo Order yePenieni (2003).
Harry Potter uye Hafu-Ropa Muchinda (2005).
Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows (2007).
Uyezve, muna 2001 Mhuka dzinonakidza uye kwadzingavawana. Panyaya iyi, iyo hofori hofori Warner Bros inoronga kuvhura iyo pentalogy. Parizvino, mafirimu maviri akateedzana akateedzera Eddie Redmayne akatoburitswa zvinobudirira.
Mamwe mazita akafanana
Harry Potter uye Akatukwa Mwana. Theatre script, yakapihwa muna Chikunguru 2016.
Quidditch kuburikidza nemazera (2001). Iri bhuku remutambo unodikanwa wemasvikiro eHowarts.
Iyo Tales yeBheedle iyo Bard (2012).
Harry Potter Rongedza - Iyo ...
Dan Brown nemwanakomana wake akarasika: Robert Langdon
Dan Brown ndiye wechipiri anotengesa zvakanyanya munyori wezana ramakumi maviri nemasere nekuda kwemufananidzo wake Robert Langdon, purofesa nyanzvi yekufananidzira uye iconography. Pakati pemabhuku ane Langdon, pasina mubvunzo, Iyo Da Vinci Kodhi (2003) ndiye akabudirira kwazvo (inodarika mamirioni makumi masere emakopi akatengeswa).
Senge izvo zvaive zvisina kukwana, Mubayiro-anokunda mutambi Tom Hanks amuunza kuhupenyu mune ese matatu ekuremekedzwa mahombe echidzitiro yakagadzirwa kusvika zvino. Akanyorwa pazasi ndiwo mamwe mazita akanyorwa naBrown nekuda kwehunhu hwake hweHarvard Docent:
Ngirozi neMadhimoni (2000).
Chiratidzo chakarasika (2009).
Iyo Da Vinci Kodhi ...
Akanyanya Kutengesa Mabhuku 2020
Rondedzero yemabhuku anotengesa zvakanyanya 2020 muchiSpanish anoikwirisa Aquitaine, neSpanish Eva García Sáenz de Urturi. Ichi chiyero chinosimbisa yakanakisa yekunyora uye yekutengesa nguva yemunyori weVitorian, anozivikanwa pakati pevaverengi vanotaura chiSpanish nekuda kwake Trilogy yeWhite City. Pamwe na Urturi, mumwe munyori wenhau anobva kuchamhembe kweSpain anoonekwa, Dolores Redondo anobva kuDonostia.
Iyo "yepamusoro 5" yemabudiriro edhisheni ya2020 anoipedza White mambo, naJuan Gómez Jurado, Infinity mutsanganaIrene Vallejo uye Mutsara wemotorakanyorwa naArturo Pérez-Reverte. Pane rimwe divi, Amazon inonongedza Chikoro chakapusa munyika, naPablo Aranda, serugwaro rwevana runotengeswa zvakanyanya rwe2020.
Aquitaine (2020), naEva García Sáenz de Urturi
Aquitaine zvinotyisa thriller nhoroondo kuburikidza nezana ramakore rekutsiva, makunakuna nehondo. Iyo inoverengeka inotanga mugore ra1137, apo Duke weAkitaine - fief yakatsvakwa zvakanyanya muFrance - akawanikwa akafa muCompostela. Nechikonzero ichi, Eleanor, mwanasikana waDuke, anoroora muchirongwa chekutsiva nemwanakomana wamambo weGallic, Luy VI mafuta.
Nekudaro, mambo weFrance anoita kunge akafa pakati pemuchato nenzira yakafanana neiyo yemuchinda. Mune vese vakafa ganda rakashanduka rikaita bhuruu uye vakaratidzirwa ne "gondo reropa" (kushungurudzwa kwakare kwaNorman). Ipapo, Eleanor naLuy VII vanotendeukira kuvasori veAkitaine (vanonzi "katsi") kujekesa chokwadi. Mavari, mwana akambosiiwa achave kiyi kune ramangwana rehumambo.
Aquitaine: Planet Mubairo ...
Ropafadzo dzeMutumwa (2009), naDolores Redondo
Kuonekwa kwenoverengeka yakaburitswa muna2009 pakati peiyo 2020 yakanyanya kutengesa runyorwa inoshamisika. kufarirwa kwezita iri i "rebound mhedzisiro" yeiyo chiyero cheBaztán Trilogy chakagadzirwa naRedondo. Iri bhuku rinofamba kubva pakutanga nekurondedzerwa kwehukama hwepedyo hwehukama pakati pevasikana vaviri vane makore mashanu ekufa uye zvakazotevera kufa kweumwe wavo.
Iyo budiriro ine yakadzika psychoanalysis. Inotsanangura kuburukira mugehena raCeleste, protagonist, kudzamara kuzarurirwa kweropafadzo dzengirozi. Sezvo mibvunzo yakasiyana siyana yakamuka pamusoro penyaya ichijeka, muverengi anotungamirirwa kumagumo anoshamisa kwazvo.
Ropafadzo dze ...
Infinity mutsanga (2019), naIrene Vallejo
Iri zita rakagamuchirwa nemaonero akanaka kwazvo kubva kunzvimbo dzekunyora dzakadai saMario Vargas Llosa, Alberto Manguel naJuan José Millas, pakati pevamwe vakawanda. Zvakaenzana, iyo mibairo yakawanda inounganidzwa neichi chinyorwa inoisa sebhuku rakanakisa risiri rekunyepedzera muSpanish che2020. Mamwe acho akataurwa pazasi:
Yakakosha Ziso Mubairo weRondedzero 2019.
Owl Mubairo weBhuku Rakanyanya 2019.
Yenyika Inosimudzira Mubairo weLatino Zvidzidzo 2019.
Madrid Raibhurari Association Mubayiro, rakanakisa risiri ngano bhuku 2019.
Yenyika Essay Mubairo 2020.
Infinity mutsanga: ...
Mutsara wemoto (2020), naArturo Pérez-Reverte
Iri bhuku mhedzisiro ye titanic kuferefetwa kwakaitwa nemutori venhau veMurcian Arturo Pérez-Reverte. Chinyorwa chinozvinyudza mune zvikonzero, kuvandudza uye mhedzisiro yeiyo Spanish Civil War kubva pakuzvitsoropodza maonero. Kupi munyori haazeze kutsanangura utachiona hwetsika nemagakava uye kuti mamwe ehunhu hwakashata huripo nanhasi.
Rondedzero yechiitiko chine ropa rakawanda pamakwikwi aya, Hondo yeEbro, inokatyamadza zvikuru, vanopfuura zviuru makumi maviri vakafa uye makumi matatu vakakuvadzwa. Nenzira imwecheteyo, Pérez-Reverte anotsaurira chikamu chakanaka chebasa rake rakakura (anopfuura mazana manomwe emapeji) kuratidza basa revarwi vevakadzi. Uye, hongu, pasina kutora mativi nerutivi.
White mambo (2020), naJuan Gómez-Jurado
Zvakare zita Tsvuku mambokadzi 3, White mambo chikamu chechitatu chetatu chakakurumbira neruzhinji nevanoongorora. Kufanana nevakatangira, bhuku iri rinopinda mune inonakidza uye inodhakisa webhu yemitambo, manias, hunyengeri, uye psychoanalysis. Uye zvakare, hazvisi pachena kune vaverengi kana iri vhoriyamu richava rekupedzisira kana kana paine dzimwe nyaya dzichitamba naAntonia naJon.
White King (Izvo Zano)
Chikoro chakapusa munyika (2020), naPablo Aranda
Iri bhuku raive rakanyanya kutengeswa re2020 muchikamu chevana zvinoenderana neAmazon Statistics. Iyo nyaya inotarisa Fede, mwana mudzidzi wechikoro chemitauro miviri (Spanish-Chirungu) inozivikanwa nenzira dzakasarudzika nzira dzekudzidzisa. Kusvika padanho rakadai, kuti iyo inosetsa uye isingafungidzirwe rondedzero inotora pane surreal maficha.
Ikoko, vana vanongorara kumba kwavo pakupera kwevhiki. Zvakanaka, kubva Muvhuro kusvika Chishanu mubereki wega wega ane chekuita nemudzidzi wekutanga waanowana. Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, eiye murondedzeri wezviitiko - mumunhu wekutanga - anogadzirisa izvo zvisingazivikanwe nekunzwisisa kwake kwevechidiki uye fungidziro yekufungidzira.
Chikoro chakapusa mu ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku anotengesa zvakanyanya
Inoita kunge rondedzero chaiyo kwandiri. Ishe weRings Saga ndeimwe yeakanakisa akanyorwa uye akagadziridzwa kuitira firimu.
Mabhuku manomwe akanyanya kudanana